Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 February 9, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
1. Posture အနေအထိုင် ပုံစံ၊ ခါးမတ်ထိုင်ပါ။ ခါးအမှီပါစေရမယ်။ ပခုံးပါ နားစရာရှိသင့်တယ်။ ခြေထောက်ကလဲ နားစေနိုင်ရမယ်။ မတ်တပ်ရပ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ခြေနှစ်ဖက်လုံးပေါ်မှာ မျှနေပါစေ။
2. Muscle strain ကြောင့်နာတာမျိုးက သူ့အလိုလိုကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Heating pad or warm baths အပူကပ်ပေးတာ လုပ်နိုင်တယ်။
3. Bed Rest ခါးနာတာကို နားခိုင်းမလား။ ခါးနာသူတွေက အိပ်ရာထဲကမထချင်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ Muscle strain ကြောင့်သာဆိုရင် လုပ်နေကြအလုပ်ကို စောနိုင်သမျှစောပြီး ပြန်လုပ်သင့်တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ၁-၂ ရက် နေသူတွေက ခါးနာပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။
5. Spinal Manipulation အထူးကုဆရာဝန်တွေက တချို့ကိုလုပ်ပေးတယ်။
6. Massage Therapy နှိပ်နည်းကို နာတာရှည် ခါးနာသူတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါလဲ ၂ လလောက် အချိန်ယူတယ်။
7. Acupuncture အပ်စိုက်ကုသနည်း ထိရောက်မှုက လေ့လာမှုတွေမှာ မတူကြတာတွေ့ရတယ်။ Simulated acupuncture နည်းရော Real acupuncture with needles နည်းရောလုပ်နတယ်။
9. Steroid Injections (စတီရွိုက်) ထိုးဆေးလဲ တချို့ကိုထိုးပေးတယ်။
12. ခါးကို Flexion and extension exercises ခါးကို အကွေး-အဆန့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးတယ်။
ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။ အတိအကျ မဖြစ်ရပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်တာ မရှိပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။ မ,စရာရှိရင် ခြေနဲ့သာ မပါ။ ခါးနဲ့ မမပါနဲ့။ အလုပ်လုပ်ရာ အနေအထိုင်မှာ ခါးကို သက်တောင့်သက်သာ အမြဲရှိပါစေ။ ခေါင်းအုံးမြင့်တာ မသင့်ပါ။ အိပ်ရာခင်း မာမာမှာသာ လဲလျောင်းပါ၊ အိပ်ပါ။ မွေ့ယာ မသင့်ပါ။ ကြိုးကုတင်၊ Dream bed (ဒရင်းမ်ဘက်)၊ စပရင်ကုတင် မသင့်ပါ။ ထိုင်ရင် ပေါင်ကအောက်ခံမှာထိနေ၊ ကျောက နောက်မှီနဲ့ ထိနေရမယ်။ ဖင်ထိုင်ခုံမှာ မထိုင်ပါနဲ့။ ကြမ်းပေါ် တင်ပါးချ မထိုင်ပါနဲ့။ ပက်လက်ကုလားထိုင်၊ (ဆိုဖါ) လိုအိတာတွေမှာ မထိုင်ပါနဲ့။ မျက်နှာသစ်၊ လက်ဆေး၊ ပန်းကန်ဆေးလုပ်ရာမှာ ကြွေခွက်၊ စားပွဲ၊ ခုံ ကိုယ်နဲ့အနေတော်ပါစေ။ နည်းနည်းလေးမှ မကုံးရစေပါနဲ့။ ရေအိမ်သာ ဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီ ကွေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားသုံးပါ။